သက်သာလောနိတ်မြို့သားမှပေါလုရဲ့ 2nd ပေးစာ – 2ငါးကို
မူလစာမျက်နှာ / သမ်မာကမျြး / စီရင်သောဩဝါဒစာ / သက်သာလောနိတ်မြို့သားမှပေါလုရဲ့ 2nd ပေးစာ
2 သက်သာလောနိတ် 1
1:1 ပေါလုနှင့် Sylvanus နှင့်တိမောသေ, သက်သာလောနိတ်မြို့သားအသင်းတော်ကိုမှ, ဘုရားသခငျသညျငါတို့အဘတည်းဟူသောနှင့်သခင်ယေရှုခရစ်၌.
1:2 သငျသညျမှကျေးဇူးတော်ရှိစေသတည်းနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေး, ဘုရားသခင်ထံမှငါတို့အဘတည်းဟူသောငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏အနေဖြင့်.
1:3 ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အကိုဘုရားသခင်အားအစဉ်အမြဲဂုဏ်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြလော့အပ်, ကိုညီအစျ, တစ်လျောက်ပတ်ထုံးစံ၌, သင်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းကိုအလွန်တိုးပွားလာသည်ကို ထောက်., အချင်းချင်းမျက်နှာသို့သငျသညျအသီးအသီး၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုအပေါများသောကြောင့်,,
1:4 ငါတို့သည်ကိုယ်ကိုကိုယ်ဘုရားသခင်၏အသင်းတော်များတို့တွင်အရာရာ၌သင်တို့ကိုပင်ဂုဏ်အသရေဒါကြောင့်ဤမျှလောက်, သောကွောငျ့သငျသညျကိုသည်းခံကြောင်းကိုသင်၏ညှဉ်းဆဲခြင်း, ဆငျးရဲဒုက်ခအပေါငျးတို့သ၌သင်တို့၏သည်းခံခြင်းယုံကြည်ခြင်း၏,
1:5 ဘုရားသခငျ၏တရားသဖြင့်စီရင်၏နိမိတ်လက္ခဏာနှင့်ယှဉ်သော, သငျသညျဘုရားသခငျ၏နိုင်ငံတော်ကိုခံထိုက်ကျင်းပစေခြင်းငှါဒါ, သင်သည်လည်းခံစားသောအဘို့.
1:6 မုချမျာ​​းအတွက်, it is just for God to repay trouble to those who trouble you,
1:10 when he arrives to be glorified in his saints, and to becomeawonder in all those who have believed, ထိုကာလ၌, because our testimony has been believed by you.
1:11 ဒီအတွက်ကြောင့်, လွန်း, ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အစဉ်ဆုတောင်း, ထို့ကြောင့်ငါတို့ဘုရားသခငျခေါ်တော်မူ၏သငျသညျကိုခံထိုက်သောသူလုပ်တတ်မည်အကြောင်းနှင့်သူ၏ကောင်းမြတ်ခြင်းအမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှလုပ်ရပ်ဖြည့်စွက်စေခြင်းငှါ, အဖြစ်ကောင်းစွာသီလကိုယုံကြည်ခြင်း၏မိမိအလုပ်အဖြစ်,
1:12 ငါတို့သခင်ယေရှု၏နာမကိုသငျသညျဖြင့်ဘုန်းထင်ရှားစေခြင်းငှါအမိန့်ရှိ, ကိုယ်တော်၌သငျတို့, ကြှနျုပျတို့၏ဘုရားသခငျ၏ကျေးဇူးတော်နှင့်အညီနှင့်သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏.
2 သက်သာလောနိတ် 2
2:1 သို့သော်ငါတို့သည်သင်တို့ကိုမေး, ကိုညီအစျ, ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်နှင့်သူ့ကိုငါတို့၏အစုဝေးများထွန်းကိုရည်မှတ်,
2:2 သငျသညျအလွယ်တကူနှောင့်အယှက်သို့မဟုတ်သင့်စိတ်ထဲတွင်ကြောက်မရကြောင်း, မဆိုဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်, သို့မဟုတ်စကားလုံး, သို့မဟုတ်ဩဝါဒစာ, နေလည်းငါတို့မှစလှေတျတျော, သခင်ဘုရား၏နေ့နီးစပ်ကြောင်းဟုဆို.
2:3 အဘယ်သူမျှမဆိုလမ်း၌သင်တို့လှည့်ဖြားကြကုန်အံ့. ဤအတွက်မဖွစျနိုငျ, အယူဖောက်ပြန်မှုပထမဦးဆုံးရောက်ရှိလာကြပါပြီလိမ့်မည်မဟုတ်လျှင်, နှင့်အပြစ်၏လူထင်ရှားခဲ့ကြလိမ့်မည်, ဖျက်ဆီးခြင်း၏သား,
2:10 and with every seduction of iniquity, toward those who are perishing because they have not accepted the love of truth, so that they may be saved. ဒီအတွက်ကြောင့်, God will send to them works of deception, so that they may believe in lies,
2:12 Yet we must always give thanks to God for you, ကိုညီအစျ, beloved of God, because God has chosen you as first-fruits for salvation, by the sanctification of the Spirit and by faith in the truth.
2:14 ဆိုတော့, ကိုညီအစျ, ရပ်တည်ချက်ကုမ္ပဏီ, သငျတို့သသင်ယူသောအစဉ်အလာမှကိုင်, စကားလုံးအားဖြင့်သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဩဝါဒစာအားဖြင့်ဖြစ်စေ.
2:15 ဒါကြောင့်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်သည်ကိုယ်တော်တိုင် may, ဘုရားသခငျသညျငါတို့အဘတည်းဟူသော, အဘယ်သူသည်ငါတို့ကိုချစ်တော်မူပြီသူကျေးဇူးတော်၌ကျွန်တော်တို့ကိုနိစ္စထာဝရသက်သာခြင်းနှင့်ကောင်းသောမြော်လင့်ခြင်းပေးတော်မူပြီ,
2 သက်သာလောနိတ် 3
3:1 အခြားအမှုအရာတို့ကိုရည်မှတ်, ကိုညီအစျ, pray for us, so that the Word of God may advance and be glorified, just as it is among you,
3:6 But we strongly caution you, ကိုညီအစျ, in the name of our Lord Jesus Christ, to draw yourselves away from every brother who is walking in disorder and not according to the tradition that they received from us.
3:7 သင်တို့အဘို့အကိုယ်ကိုကိုယ်သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုတုပ်၏ရသောထုံးစံသိ. ငါတို့သည်သင်တို့တွင်မတရားစွာမဟုတ်ကြဘို့.
3:8 မဟုတ်ကျွန်တော်အခမဲ့မည်သူမဆိုမှမုန့်ကိုစားရခဲ့, ဒါပေမယ့်အစား, ကျွန်တော်တို့နေ့ညဉ့်မပြတ်အလုပ်လုပ်ခဲ့, ဆင်းရဲဒုက္ခကိုနှင့်ပင်ပန်းအတွက်, ဒါကြောင့်သကဲ့သို့သငျဖို့ခဲဖြစ်ဖို့မ.
3:9 ငါတို့သည်နောက်အခွင့်အာဏာရှိခဲ့လျှင်ကြောင့်မဟုတ်ခဲ့, ဒါပေမဲ့ဒီထို့ကြောင့်ငါတို့သည်သင်တို့မှဥပမာတစ်ခုအဖြစ်ကိုယျ့ကိုယျကိုတင်ပြစေခြင်းငှါခဲ့သည်, ကျွန်တော်တို့ကိုတုပနိုင်ရန်အတွက်.
3:10 ထိုအခါ, လွန်း, ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်အတူရှိကြ၏စဉ်, အကြှနျုပျတို့သညျဤအပေါ်အခိုင်အမာ: မည်သူမဆိုအလုပ်လုပ်ကိုင်ဖို့ဆန္ဒရှိမဟုတ်ခဲ့လျှင်, မဟုတ်သူကိုစားသင့်တယ်.
3:11 ငါတို့သည်အချို့သောပြတ်တောက်ပြုမူသောသူသည်သင်တို့တွင်ရှိကွောငျးကြားရကြပြီအကြောင်းမူကား, မှာအားလုံးအလုပ်လုပ်မ, ဒါပေမဲ့စိတ်အားထက်သန်စွာစေသော.
3:12 ယခုငါတို့ဒီလမ်းအတွက်ပြုမူသောသူတို့အားကိုအားသွင်း, ကျနော်တို့သခင်ယေရှုခရစ်၌သူတို့ကိုတောင်းပန်ပါ၏, သူတို့တိတ်ဆိတ်စွာအလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းနှင့်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်မုန့်ကိုစားမည်အကြောင်း.
3:13 ပြီးတော့သင်, ကိုညီအစျ, do not grow weak in doing good.
3:15 But do not be willing to consider him as an enemy; အစား, correct him asabrother.
3:16 Then may the Lord of peace himself give you an everlasting peace, ခပ်သိမ်းသောအရပ်၌. May the Lord be with all of you.
3:18 May the grace of our Lord Jesus Christ be with you all. အာမင်.